Ingabe izingane ezincane kufanele zijabule?
Abazali abakhathalela ingane yabo bavame ukuzibuza - uma izingane ezincane kufanele zibuke? Ngezinye izikhathi ukukhathazeka kwabo kulungile, ngoba ukugwedla kungaba ubufakazi besifo sangaphakathi.
Kunezizathu eziningana zokuthi kungani ukuhlunga kubonakala kubantwana abancane, sizocabangela ngamunye wabo.
Isizathu sokuqala siyiphupho. Ingane encane ibona izinto ezintsha eziningi nsuku zonke, kamuva ezibonakala ephusheni. Ezinye izingane azikhathazeki ngakho futhi zilale ngokuthula. Futhi abanye, ngokuphambene nalokho, baqonda yonke into ekhuthele kakhulu futhi baphendule ephusheni. Kwakungenzeka ukuthi izingane ezincane, emva kwephupho elimbi, ayeke ukukhuluma amagama athile noma awukwazi ukuhamba ngamanzi. Futhi ukubuyisela isimiso sezinzwa zalaba bantwana kuthatha isikhathi esiningi. Ngakho-ke, izingane zingakwazi ukubamba ngenxa yamaphupho. Ukuze ubhekane naloluhlobo lwe-snoring, thinta nje umntwana, ungamthinta ngemuva noma ikhanda. Khona-ke ingane izozizwa ukuthi umuntu wesilisa ukhona naye futhi amvikele, inyoka ingayeka.
Enye imbangela yokugwedla ingaba umphimbo. Ku-tonsillitis okungapheli noma pharyngitis, futhi nge-angina, kungenzeka kube nokuphefumula nokugwinya. Ngenxa yobuhlungu obuvela nokuzwa okungathandeki, izingane ziqala ukugubha ngoba ziqala ukuphefumula ngekhala. Ngakho abazizwa bebuhlungu futhi baqhubeke bephupha. Uma, kanye ne-snoring, kukhona nokuvuthwa, khona-ke lokhu kuwubufakazi bokuthi imbangela yokubamba isifo somphimbo ngempela.
Isizathu sesithathu sokubamba yisiphetho. Uma iphunga likhishwa ngesinyenyezi, khona-ke ingane inzima ukuphefumula ngakho-ke i-snoring kwenzeka. Uma kungenakwenzeka ukuphefumula ngomlomo, umuntu ufuna insindiso emmpumeni, kodwa uma impumu inganyanyiswa, umlomo uvule kancane emzamweni wokuphefumula nokwenza izinkomba.
Isizathu esilandelayo sokubamba ukushayisana kuyinkinga. Uma ngesikhatsi ingane ihlangene nokuhlangenwe nakho okukhulu ngokomzwelo kanye nokuphazamiseka, kusobala ukuthi imvelo encane ayikwazi ukubhekana nezimo ezinjalo futhi manje idinga ukuphumula. Ukunqoba kule nkinga akuthwali lutho, kodwa kuyisibonakaliso sokukhathala okuqinile kwengane. Kulokhu, udinga isikhathi esiningi sokuphumula, ukuze kube nokuthula futhi umzimba uphelile futhi uphumule emoyeni ozolile.
Ukukhathazeka kwengane, uma eqala ukudubula, kuphela uma evimbela ingane ekuphefumuleni. Ikhala elikhulu elivame kakhulu akukuvumeli ukuba uphefumule ngendlela evamile futhi ingane iqala ukunyakaza. Uma kwenzeka lokhu ngesikhathi sokulala, kuyadingeka ukuthi uxhumane nodokotela wezingane / ozobeka ukuxilongwa okunembile nokubeka imithi uma kunesidingo.
Uma ingane inenkinga emqaleni, ungazama ukusebenzisa imiyalelo yasekhaya yokwelapha. Enye yezokwelapha ekhaya igxuma nge-soda. Kubalulekile ukwenza lokhu njalo ekuseni. Unganika futhi itiye ngelamula ne-mint. Ngoba i-mint ikhuthaza ukukhwehlela okuhle nokuqothulwa komuthi. UMelissa unomphumela ofanayo.
Ngemuva kokushaqeka nezinye izingozi, ingane ngokuvamile iqala ukulala ngokulala futhi ngezinye izikhathi inyoka. Ukuze uphume kulesi simo, ingane idinga ukunakekelwa komama nesithandwa. Ngosuku nosana kumele bahlale bedlala. Kusihlwa, ungakwazi ukugeza umntwana endlini yokugezela nge-addition lavender noma i-chamomile. Lokhu kuzosiza ekunciphiseni ukuphazamiseka kwemizwa emntwaneni, bese ubuthongo obuzofika ngokushesha. Ngaphambi kokuba ingane ilele, kubalulekile ukuba uhlale naye. Umntwana wazizwa esondelene nomuntu wakubo, wazizwa evikelekile, ngakho-ke engesabi ukuvala amehlo akhe.
Ngezikhathi ezinjalo kubalulekile ukunikeza ingane ngangokunokwenzeka imikhiqizo ewusizo: imifino nezithelo. Kodwa ngesikhathi esifanayo, ungakhohlwa futhi uzibandakanye ngamaswidi, ngoba kubangelwa ukwenziwa kwamahomoni enjabulo kuma-endorphin wengane.
Uma ingane iphilile, ke ngesikhathi sokulala, akufanele ikwazi ukuhlehliswa. Ungakhohlwa ukunaka umbuso wosuku lomntwana, khona-ke ngeke kube khona izinkinga kuwo.
Kungani sidinga usizo lokuqala?
Amathiphu kwabazali ngempilo
Imithetho yokuphepha phakathi nemidlalo nesihlabathi
Ukucwiliswa kwe-drainage yokwelapha izifo zokuphefumula
Ukuphuma kwegazi emanzini emanzini
Ukuhlinzwa kwezingane zasepulasitiki, i-bumpiness
Inyama izitsha kusuka cutlet nesisindo oqoshiwe
Amathoyizi ekuthuthukiseni amakhono amancane emoto kubantwana
Ikhekhe elimnandi ngo-Mashi 8
Ijaji lezimbuzi zezimbuzi zezimbuzi zase-2015-2016, isithombe
Ama-champignon othosiwe ojulile othosiwe
Ngidinga isilwane ingane yami?
Indlela yokuhlanza kahle ikhompyutha yakho ngothuli
Gazpacho nge isithombo kanye fennel
Oatmeal smoothies ngebhanana nama-strawberries
Inkukhu ngamakhowe kanye ne-Mozzarella ushizi
Izinganekwane mayelana nokuhamba ngegazi: indlela yokubalekela ekuthunjweni kwamanga
Isitshalo seqanda e-Istanbul
Abathandi be-"House-2" bathuswa ngokuhlinzwa kweplastiki uMargarita Kern, isithombe